Life fiantohana dia ilaina matetika rehefa heverina ny hoe tsy nampoizina ny zavatra mitranga - ny zavatra toy ny fahaverezan'ny tampoka fiainan'ny breadwinner. The primary value of any life insurance policy is that it provides financial protection for your family if you ...Read More
Rehefa mandinika ny zava-nitranga tampoka izay nitranga sy ny olona maty, ianao dia hahatsapa ny tsy maintsy manana fiainana ny fiantohana mba hiarovana ny olon-tiana amin'ny raharahan-misy eventualities. Ao amin'ny fanadihadiana farany, life insurance policies do not only protect ...Read More
Efa nieritreritra ny insuring ny vatana faritra? Na dia mety tsy ho porofoina mbola tany Nizeria, dia tsaho fa ny malaza Juju mozika, Sunny King Ade, insured his guitar-plucking fingers for huge millions of Naira in case of some dismemberment of these ...Read More
Ny fomba fiteny mahazatra hoe "fahasalamana no harena" underlines ny ilana ny fahasalamana sy ny fitsaboana fiantohana. Health dia ny zavatra rehetra, ary tsy misy na inona na inona na iza na iza saika afaka manao na hanatratra tsy misy tsara sy salama. Na izany aza, na iza na iza ny fahasalamana amin'ny fotoana rehetra ka tsy afaka, imperilling your life ...Read More